Brushed Nickel Single Handle ရေချိုးခန်း Faucet | ရေချိုးခန်းသုံးရေအိုးများ
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucets / WOWOW ရေချိုးခန်းရေယာဉ် Faucets Brushed Nickel
ထူးထူးခြားခြားစတိုင်: ဤလက်ကိုင် တစ်ချက်တည်းပါရှိသော ရေချိုးခန်း faucet သည် စတိုင်ကျသောအသွင်ကို ပေးစွမ်းသည် — လှည့်ကွက်ဖြင့်။ ဤစီးပွားဖြစ်ရေချိုးခန်းသုံးရေချိုးခန်း၏ထူးခြားသောအကွေးအကောက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဂန္ထဝင်စုတ်တံနီကယ်အချောအလှသည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းအလှဆင်မှု၏ထူးခြားချက်ဖြစ်လာမည်မှာသေချာပါသည်။
အရည်အသွေးကောင်း လက်ရာ: ဤရေချိုးခန်းအပေါက်တစ်ခုတည်းတွင် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော faucet တွင် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံချေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြေးဝါချိတ်ဆက်ကိရိယာများပါရှိသည်။ အစက်အပြောက်ကင်းစင်သော ကြွေကျည်တောင့်ကို ပိုက်ခေါင်းအတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ချောမွေ့စွာ လှည့်ပတ်နိုင်ပြီး ရေယိုခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် သေချာစေရန် တင်းကျပ်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။
တပ်ဆင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။: ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပြည့်စုံသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်သည့်ကိရိယာများဖြစ်သည့် pop-up မြောင်း၊ ကုန်းပတ်ပြား၊ 0.5m tucai ရေပိုက်၊ လက်အိတ်စသည်ဖြင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ချိန်ညှိနိုင်သော နီကယ်ရေချိုးခန်းသုံး ရေချိုးခန်းသုံး ရေချိုးခန်းမှ လက်ကိုင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ရေစီးဆင်းပြီးနောက် ရေ၏အပူချိန်တိုးလာစေရန် လက်ကိုင်ကို ရှေ့သို့လှည့်ပါ။
ကြာရှည်ခံသောရေကိုချွေတာသောလေအေးပေးစက်: ဤရေချိုးခန်းသုံး ရေချိုးခန်းသုံး faucet ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Neoperl Aerator သည် နူးညံ့ချောမွေ့သော ရေစီးဆင်းမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ရေအသုံးပြုမှု 50% ထက် ပိုသက်သာစေပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန် သန့်ရှင်းရေးအတွက် ပါဝင်သော လေအေးပေးစက်ဖြင့် အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အာမခံချက်: သင့်ဝယ်ယူမှုသည်5နှစ်ကန့်သတ်အာမခံနှင့် ရက် 90 ပြန်ပေးရေးမူဝါဒဖြင့် အကျုံးဝင်သောကြောင့် သင်သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အား ဝမ်းမြောက်စွာ ဂရုစိုက်ပါမည်။
ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင် 2321501
ဤရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်သင့်ရေချိုးခန်းကိုအဆင့်မြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ၎င်းကိုအသွင်ဖြင့်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းသိမ်မွေ့သောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ WOWOW ၏ထူးခြားသောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုဂန္တောက်သောနီကယ်အကာနှင့်ပေါင်းစပ်။ သုံးဆစ်ကွေးဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းတွင်မဆိုမျက်လုံးပြူးသူဖြစ်ပြီးသင့်ရေချိုးခန်းအသစ်၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သုတေသနပြုချက်အရမည်သည့်ရေချိုးခန်းတွင်မဆိုရေချိုးခန်း faucets များသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သူမဆို၏အာရုံကိုအလိုအလျောက်ရေချိုးခန်း faucets သို့ဆွဲဆောင်သည်။ များသောအားဖြင့်ရေချိုးခန်း faucets များသည်သင်၏ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းတွင်အသေးငယ်ဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအသေးသူတို့က၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါ၏အမြင်အပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်သည် WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်နှင့်အတူမည်သည့်ရေချိုးခန်းကိုမဆိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာထိတွေ့နိုင်သည်။ WOWOW ၏ဒီဇိုင်နာများသည်ရေချိုးခန်း faucets များ၏သက်ရောက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမည်သည့်အလှဆင်မှုတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေနိုင်သောရေချိုးခန်း faucets များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
သင်၏ရေချိုးခန်းအလှဆင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စတိုင်ကျ။ အလုပ်လုပ်စေလိုသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်မည်သည့်ရေချိုးခန်းအမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်း faucets အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့်သင်ရရှိနိုင်သောနေရာနှင့်ရေအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုနှစ်သက်သောအရာများကို ဦး စွာလေ့လာသင့်သည်။ သင်သည်ရေအပူချိန်နှင့်အသံပမာဏကိုလက်ကိုင် ၂ ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ထိန်းချုပ်လိုပါသလား။ သင်လက်ကိုင်တစ်ခုကိုသာနှစ်သက်ပါက WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်သင်ရှာဖွေနေသောကြော့ရေချိုးခန်း faucet ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်စတိုင်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးကနေဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောကွေးသောလက်ကိုင်သည်ရေချိုးခန်း faucet ၏ဘေးထွက်တွင်ရှိသည်။ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။ ရေထုထည်နှင့်အပူချိန်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လက်ကိုင်တစ်ခုတည်းသည်ကိုင်တွယ်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူမည်မှာသေချာသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာကဆွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး တည်းလက်ဖြင့်ရေချိုးခန်း faucet ၏လက်ကိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ချိန်ညှိရေစီးဆင်းမှုကိုသက်ဝင်စေသည်။ လက်ကိုင်တစ်ခုတည်းကိုလည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရေအပူချိန်ကိုအလွယ်တကူချောမွေ့စွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ယူအက်စ်မူပိုင်ခွင့်သုံးဆ - ကွေးပုံဖော်မှုသည်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရေချိုးခန်းကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းသောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးမှအကျိုးအမြတ်ရရှိစေပြီးအဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုပင်ပြုလုပ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနီကယ်အချောကိုလက်ဖြင့်တီးပြီးအရောင်တင်ထားသည်။ အဆုံး၌ WOWOW သည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုခိုင်ခံ့သောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဤတီထွင်ထားသောရေချိုးခန်း faucet သည်အစိုဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ချေးယူနိုင်သည်။ WOWOW သည် ၄ ​​င်း၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်အတွက် ၃ နှစ်အာမခံကာလပေးသည်။ WOWOW သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်တစ်နှစ်တာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တာ ၀ န်ယူကြောင်းသက်သေပြခြင်း။
ဒီရေချိုးခန်း faucet ၏လက်ကိုင်တစ်ခု၏ဒီဇိုင်းမှာမူထူးခြား။ မူပိုင်ခွင့်ရရှိသောကြောင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့သည်ထူးခြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေရှည်ခံနိုင်သောရေကိုပြသည်။ ဒီရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Neoperl Aerator သည်နူးညံ့ချောမွေ့သောရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ရေမှုန်ရေမွှားကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရေအသုံးပြုမှုတွင် ၅၀% အထိသက်သာစေသည်။ ဤသည်ကိုသင်သေချာစွာသင်၏ရေဥပဒေကြမ်းအပေါ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ aerator (ပါဝင်သည်) aerator tool ကိုအတူအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံနိုင်ရန်အတွက်သင်အလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်သည်။
လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းနိုင်သောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
ပထမ ဦး စွာ brushed nickel finish သည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းကိုမဆိုကြော့ရှင်းစွာထိတွေ့စေသည်။ ထို့အပြင်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးသည့်အပြင်ရေအစက်အပြောက်များ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုနောက်တဖန်အသစ်ဖြစ်စေရန်သင်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာအားလုံးကိုစိုစွတ်သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်လိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏ရေချိုးခန်း faucet ကိုမှန်မှန်သန့်ရှင်းစေရန်အသက်ရှည်ရှည်ခံရန်အာမခံပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ခက်ခဲသောအကြွင်းအကျန်များသည်သင်၏ရေချိုးခန်း faucet နှင့်ကပ်ရန်မပြောင်းလဲပါ။ အထူးသဖြင့်မြေဖြူတွေသုံးပြီးကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကသင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းသန့်စင်မှုကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းမထားရင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှမရှိဘဲသင်လုပ်နိုင်ရန် WOWOW က၎င်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏ကြွေအဆို့ရှင်သည် ၁၀၀% ယိုကင်းစင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ ထိုအသေးလည်ပတ်မှုကချောမွေ့လျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ။ ဤအရည်အသွေးမြင့်ကြွေသောအရာတစ်ခုကိုရေသံသရာ ၅၀၀၀၀၀ နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်အတူတူပင်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နေခဲ့သည်။ နှင့်သင်တန်း၏နေဆဲယို - ကြေးများနှင့်ယိုစိမ့် - အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်း faucet ကိုတစ်နှစ်လျှင်အကြိမ် ၁၀၀၀၀ ထက်မကအသုံးပြုသင့်သည်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းဖြင့်သင်သည်ဘ ၀ အတွက်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်လက်ကိုင်ရေချိုးခန်း faucet ထို့ကြောင့်အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများထက်ကျော်လွန်!
Do-it-yourself ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျမဆိုအကုန်အကျရေပိုက်ကွန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်! ထို့ကြောင့်သင်သည်တပ်ဆင်စရိတ်ကိုလည်းသိသိသာသာသက်သာစေနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရေချိုးခန်း faucet ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း tools များပြည့်စုံအစုံနှင့်အတူထောက်ပံ့ထားသည်။ ၎င်းတွင်သတ္တုကုန်းပတ်ပြား၊ အာမခံအရည်အသွေးရှိသော ၂၀ လက်မရှိသော Tucai ရေပိုက်၊ တပ်ဆင်ထားသောလက်အိတ်များ၊ aerator ဖယ်ရှားသည့်ကိရိယာနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း WOWOW သည်၎င်း၏ရေချိုးခန်း faucets များ၏အရည်အသွေးကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်သင်အား ၃ နှစ်အာမခံသက်တမ်းကိုပေးသည်။ သင်၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်လုပ်သင့်သည်ကဲ့သို့မဟုတ်ပါကသင့်အားအစားထိုးရန်သင့်အားအသစ်သောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် WOWOW သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြန်ငွေကိုအာမခံချက်ပေးထားသည်။ အကယ်၍ WOWOW ကသင့်အားကမ်းလှမ်းသောငွေတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အထင်ကြီးမခံပါကသင်လုပ်လိမ့်မည်
US မှ မူပိုင်ခွင့်ရထားသော triple-curve ဒီဇိုင်း
နီကယ်ကို ကျက်သရေရှိစွာ စုတ်တံ
ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော လေအေးပေးစက်ဖြင့် ရေ၏ 50% အထိ သက်သာစေသည်။
အာမခံကာလ3နှစ်
SKU: ၂၃၂၀၂၀၁ Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucets Tags: 1 ကိုင်တွယ်, ၂၁ ပေါက်, ရေချိုးခန်း faucet
16.2 x ကို 9.1 x ကို6လက်မ